Christie Agatha. Makore zana nemakumi matatu ekuberekwa kwake. Mamwe mitsara | Zvazvino Zvinyorwa
Mufananidzo: Cordon Press
Agatha Christie Akazvarwa pazuva rakafanana nanhasi muTorquay, England, makore 130 apfuura. Mukadzi wematsotsi, uyo asina kurega kuve, aive ne upenyu kusviba asinganzwisisike senge zvirongwa zvemanoveli ake. Munyori anonyanya kuverengerwa mungano izvozvi haina kuenzaniswa mukuzivikanwa uye masitayera, asi kuteedzera, kuyemurwa, uye kukudzwa kasingaperi. Uye zvichiri kudaro chinhu chine nharo. Ini ndinopemberera ino yekuyeuka ne kusarudzwa kwemutsara mamwe emabasa ake mazhinji.
1 Agatha Christie - Latest
2.1 Vatema gumi vadiki
2.2 Kufa muvicarage
2.3 Rufu paNire
2.4 Kuuraya kwaRoger Ackroyd
2.5 Kuuraya paMabvazuva Express
2.6 Chakavanzika chegwara rezvitima
2.7 Katsi iri mu dovecote
2.8 Kuuraya pane yegorofu
2.9 Chitunha muraibhurari
2.10 Murume akapfeka sutu yebhuruu
2.11 Nzou dzinogona kurangarira
2.12 Kuroora hounds
Agatha Christie - Latest
Nekuti inoramba ichiverengwa nekuongororwa. Ivo vanoramba vachigadzirwa adapta kune iyo cinema yemanoveli ake, akanyanya kuitika e Rufu paNire, zvakare naKenneth Branagh se Hercule Poirot. Uye yekupedzisira kupokana ane nyeredzi mukati muzukuru wake apo uchisimudza chinyorwa chitsva che Vatema gumi vadiki nekuchinja kwe mazita ezvematongerwo enyika akarurama.
"Ndezvipi zvinangwa zvakajairika, Monsieur Poirot?"
"Chakajairika imari." Ndokunge, kukunda mumatanho ayo akasiyana. Zvino kune kutsiva uye rudo, uye kwakachena kutya uye ruvengo, uye kubatsirwa.
"Ah hongu mhamha." Ini ndinoziva nezvekuti A kubviswa naB chete kuitira kuti ubatsire C. Kuurayiwa kwezvematongerwo enyika kunowanzouya mumutambo mumwe chete. Mumwe munhu anoonekwa seanokuvadza kubudiriro uye anobvisirwa izvo. Vanhu vakadai vanokanganwa kuti hupenyu nerufu ibhizimusi raIshe akanaka.
Vakadzi vasingazivi vanoona chiuru chehukama, vasingazive zvavari kuita. Kusaziva kwako kunosanganisa izvi zvinhu zvidiki nemumwe uye vanozvidaidza izvo intuition.
Kuuraya paMabvazuva Express
Izvo zvisinga gone hazvigone kuitika; Naizvozvo, zvisinga goneki zvinofanirwa kuve zvichikwanisika, zvisinei nekuonekwa.
Rufu, mademoiselle, zvinosuruvarisa zvinogadzira rusaruro. Kufungira zvakaipa mufi ... Panogara paine rudo rwakanyanya kune vakafa.
Chokwadi ndechekuti vanhu vazhinji, kwete kusanganisa mapurisa, vane chivimbo chakanyanyisa munyika yakaipa iyi. Tenda zvakawandisa pane zvavanoudzwa.
Murume akapfeka sutu yebhuruu
Hupenyu hwakaoma chaizvo. Varume havazove vakanaka kwauri kana ukasatarisika, uye vakadzi havazove vakanaka kwauri kana ukadaro.
Mazwi zvinhu zvisina chokwadi zvinhu zvekuti zvinowanzo rira kunge zvakanaka, asi zvinoreva zvinopesana nezvavanofungidzirwa kutaura.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Nhema nhema » Christie Agatha. Makore zana nemakumi matatu ekuberekwa kwake. Zvimwe zvirevo